Maxaynu ugu baahanahay Magnesium?
Kahor intaanan guda galin Magnesium L-Threonate kaalmo-dhaqaaleedka "nootropic supplement", waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax ka fahamto furaheeda ka horreeyay.
Magnesium waa nafaqeeye muhiim ah, oo si firfircoon ugu lug leh dhowr geeddi socod oo jirka ah. Cunsurku wuxuu hayaa foosha murqaha iyo nasashada, isku-darka borotiinka, iyo howlaha neerfaha. Ka sokow, waxay xakameysaa sonkorta dhiigga waxayna ilaalisaa cadaadiska dhiigga.
In kasta oo aad qaadan karto Magnesium halkii se, haddana waxyaalahan badankood ee dheeri ah ayaa ah kuwa loo yaqaan 'chelated' ama lagu xidho amino acids. Chelation wuxuu hagaajiyaa nuugista, xasilloonida, iyo bioavailability ee macdanta.
Isku-soo-ururinta Magnesium waxay ka sarreysaa maskaxda marka loo eego qaybaha kale ee jirka. Waxay dib uga noqotaa gabowga maskaxda iyadoo kor u qaadeysa baaxadda iyo cufnaanta synaptic, oo ah arrimo muhiim u ah ka shaqeynta garashada. Yaraanta Magnesium laba-cirifoodka, waallida, cudurka Alzheimers, dhaawaca maskaxda ee daran, shisoofrani, suuxdin, niyad jab, iyo xaalado kale.
Isticmaalka daaweynta ee Magnesium ee caafimaadka neerfaha ayaa laf dhabar u ahaa. Sababta ayaa ah in macdantaani aysan si fudud uga talaabin xayndaabka maskaxda-dhiigga. Si kastaba ha noqotee, daah-furkii dhulka ee Budada Magnesium L-Threonate budada noqday xalka ugu dambeeya ee halxiraalaha.
Waa maxay Magnesium L-Threonate?
Budada Magnesium L-Threonate waa isku-dhafka maaddooyinka Magnesium iyo L-Threonate. Maaddada ayaa labanlaaban sida a nootropic iyo dawada neuroprotective.
Jiritaankeedu wuxuu dib u bilaabmay sanadkii 2010 markii Guosong Liu iyo dhakhaatiirta kale ee ku takhasusay cilmiga neerfaha ee Massachusetts Institute of Technology ay heleen kaabis hufan oo kobcisay garashada jiirka Kahor daahfurkaan, cilmi baarayaashu ma ogaan karin sida magnesium loogu rakibo maskaxda tan iyo markii macdanta laga xayiray caqabadda maskaxda-dhiigga.
Magnesium L-Threonate supplements waa synthetic. Si kastaba ha noqotee, way ka badan tahay bioavailable marka loo eego dhismayaasha kale ee Magnesium. Ka sokow, waxay si fudud u gudubtaa caqabadda maskaxda-maskaxda, markaa, beddelka ugu dambeeya ee yaraanshaha Magnesium ee maskaxda. Isku-darka wuxuu kobciyaa heerarka magnesium-ka ee maskaxda 15%.
Faa'iidooyinka Magnesium L-Threonate maskaxda iyadoo kor u qaadeysa neuroplasticity-ka. Ka sokow, waxay sidoo kale ka shaqeysaa sidii loo kordhin lahaa arrimaha maskaxda ka dhasha ee neurotrophic, kuwaas oo muhiim u ah sameynta unugyada neerfaha.
Maxaa loo adeegsadaa Magnesium L-Threonate?
Magnesium L-Threonate wuxuu faa'iido u leeyahay maaraynta cilladaha maskaxda. Daroogadu waxay kordhisaa uruurinta magnesium-ka unugyada maskaxda.
Psychonauts waxay iibsadaan Magnesium L-Threonate faa'iidooyinkeeda nootropic. Waxay kor u qaadeysaa xusuusta episodic, barashada, iyo xoojinta diiradda. Dheeraadku waa qaddar rijeeto ah oo loogu talagalay bukaanada la il daran xusuusta la xiriirta da'da, ADHD, waallida, iyo cudurka Alzheimers.
Faa'iidooyinka 'Magnesium L-Threonate' sida kaabis nootropics ah
Kobcinta Waxqabadka Garashada
Magnesium wuxuu si fudud uga gudbaa caqabadda maskaxda-maskaxda sababo la xiriira curiye Threonate ah. Molikiyuulkani wuxuu mas'uul ka yahay kororka cufnaanta synaptic iyo wareejinta neerfaha.
Qaadashada Magnesium L-Threonate waxay xoojisaa waxqabadka maskaxda, feejignaanta, iyo xusuusta shaqada. Sida laga soo xigtay tijaabo caafimaad oo la daabacay, maaddooyinka daraasadda ee qaatay kaabahan ayaa soo sheegay horumar xagga xusuusta episodic, howlaha fulinta, iyo feejignaanta.
Dib-u-celinta Gabowga Maskaxda
Isticmaalka Magnesium L-Threonate wuxuu rogaa da'da maskaxda ee waayeelka. Baarayaasha waxay xaqiijinayaan in daawada laga yaabo inay shaqada maskaxda ka dhigto inay muuqato sagaal sano ka yar.
Gabowgu wuxuu ka dhigaa isku-dhejinta maskaxda inuu yaraado, taasoo keenta hoos u dhac maskaxeed. Si kastaba ha noqotee, Magnesium L-Threonate supplements waxay ka shaqeysaa iyadoo laga hortagayo luminta synapses-yada iyo xoojinta neuroplasticity. Ka sokow, waxay haysaa heerarka maskaxda ee magnesium illaa heerarka ugu wanaagsan.
Kaabista Magnesium L-Threonate ADHD waxay yareysaa welwelka iyo heerarka walaaca. Daroogadu waxay iftiimisaa niyaddaada, waxayna kaa tagaysaa hufnaan maskaxeed oo sarreysa. Waxay ku shaqeysaa iyada oo kor u qaadeysa neurobareennada GABA iyo sidoo kale joojinta kicinta kiimikooyinka walaaca.
Caqabada maskaxda-maskaxda, Kaabis Magnesium L-Threonate xannibi hormoonnada buufiska ee soo gala maskaxda.
Ka sokow, waxay kaa ilaalinaysaa xusuusta cabsi leh, hanjabaadaha dhabta ah, iyo khibradaha naxdinta leh ee keena walaaca.
Haddii aadan hurdo lahayn, waxaad ka iibsan kartaa Magnesium L-Threonate si uu u hagaajiyo hurdo la'aantaada. Dheeraadku wuxuu dabciyaa muruqyada isagoo kalsiyum ka sii daaya iyaga. Waxay kaloo yareyneysaa cortisol iyo qaar kale oo hormoonnada walbahaarka ah, oo hor istaaga melatonin iyo awoodda hurdo yar.
Maareynta Cudurada Neurodegenerative
Awoodda daawada Magnesium L-Threonate ADHD ee lagu daaweynayo bangiyada cudurrada neurodegenerative xaqiiqda ah in xaaladahaani ay ku xiran yihiin heerarka hoose ee Magnesium. Neuroscientists waxay laxiriiraan yaraanta Magnesium ee maskaxda ADHD, waallida, iyo Alzheimers.
Waxaa intaa dheer, qaadashada kaabsoosha 'Magnesium L-Threonate' waxay ka hortageysaa hoos u dhaca maskaxda iyo xusuusta oo lunta, taas oo ah saameynta neerfaha ee ku dhaca asaasaqa ama Alzheimer.
Sida loo qaato Magnesium L-Threonate
Qiyaasta Magnesium L-Threonate waxay ku xiran tahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan jinsi, da ', iyo isticmaalka loogu talagalay. Tusaale ahaan, qiyaasta caadiga ah ee 19 illaa 30-sano jirka waxay ku saabsan tahay 400mg halka haweenkuna ay isticmaali doonaan 300mg. Qof kasta oo ka sarreeya 31 sano wuxuu ku kordhin karaa tirada 20mg, labada jinsiba.
Markaad qaadanaysid nootropic Magnesium L-Threonate si kor loogu qaado garashada, qiyaasta waxay ku dhici kartaa ilaa 1200mg maalintii. Taas bedelkeeda, qadarku wuxuu u dhacayaa 400mg marka la isticmaalayo Magnesium L-Threonate siyaado hurdo oo loogu talagalay astaamaha hypnotic.
Markaad qaadanayso dhismahan sidii kaalmada cuntada, waxaad isticmaali kartaa inta udhaxeysa 1000mg iyo 2000mg maalintii. Sida la doorbidayo, waa inaad u kala qaybisaa kaabsoosha 'Magnesium L-Threonate' laba qaadasho oo aad maamushaa subaxa iyo waxyar ka hor intaadan seexan.
Ma jiraan waxyeellooyin soo raaca qaadashada magnesium L-Threonate supplement?
Waxyeellooyinka caadiga ah ee 'Magnesium L-Threonate' waxaa ka mid ah madax xanuun iyo lulmo. Hurdadu waa duco asturan, iyadoo kuxiran xaaladaada. Tusaale ahaan, haddii aad la dhibtooneysid hurdo la'aan, daroogada hurdada ee Magnesium L-Threonate ayaa kaa caawin doonta inaad isha ku qabato.
Kaabidani waxay sidoo kale faragalineysaa waxtarka daawooyinka kale. Waxaa laga yaabaa inaad la tashato dhakhtarkaaga markaad qaadanaysid antibiyootiko, murqaha nasteexo, khafiifiyeyaasha dhiigga, ama daawooyinka dhiig karka. Sababta ayaa ah in magnesium-ka ay dib u dhigi karto farmasiga.
Budada Magnesium L-Threonate waxay isticmaashaa iyo codsi
Magnesium L-Threonate waa nootropic awood leh. Waxay dhiirrigelisaa sameynta xusuusta, barashada, iyo fiiro gaar ah. Sababtaas awgeed, waa dawo dhakhtar qoro oo loogu talagalay maaraynta xaaladaha neerfayaasha jirka.
Daroogada walwalka ee 'Magnesium L-Threonate' ayaa dib u celisa bidaarta qaabka labka. Isku-darka L-Threonate wuxuu yareeyaa awoodda hoormoonka dihydrotestosterone (DHT), oo mas'uul ka ah timo luminta.
Waxaa intaa dheer, dadka dhib ku qaba hurdo la'aanta waxay u isticmaali karaan daawadan daaweynta hurdo la'aanta. Kaliya maahan inay dabciso murqaha laakiin sidoo kale waxay dejisaa jirka inta yareynta walwalka iyo diiqadda. Duufaan ku socota dib u eegista Magnesium L-Threonate waxay xaqiijineysaa in dadka isticmaala badankood ay la kulmi doonaan lulmo wax yar ka dib markay maamulaan kaabista.
Halkee laga iibsadaa budada cayriin ee Magnesium L-Threonate
Waxay u badan tahay inaad ku dhegan tahay Magnesium L-Threonate halka laga iibsado hagaha, iyada oo la tixgelinayo soo iibsiga miiska dukaanka nootropics waa mamnuuc inta badan gobolada. Waa hagaag, waa waqtigii aad tixgelin lahayd inaad iibsato supplements dukaamada internetka oo ansax ah.
Waxaan si madax-bannaan u soo saareynaa dhammaan alaabteenna shaybaarada tayada leh ee kontaroolan. Waad kaydsan kartaa wax badan adoo iibsanaya budada magnesium L-Threonate oo badan.
Muxuu ku fiican yahay Magnesium L-Threonate?
Kiniiniyada Magnesium L-Threonate waxay taageertaa shaqada garashada iyo sameynta xusuusta. Si ka duwan kuwa kale noocyada magnesium, xaruntan ayaa marin u ah caqabada maskaxda-maskaxda. Waa a nootropic neeroprotective.
Intaa waxaa sii dheer, bukaanjiifka la dagaallamaya cudurrada neurodegenerative waxay iibsan karaan Magnesium L-Threonate si ay u maareeyaan xaaladdooda.
Goorma ayaan qaataa Magnesium L-Threonate?
Waa inaad qaadataa kaabiddan subaxdii iyo ka hor wakhtiga jiifka. Mid ka mid ah Magnesium L-Threonate waxyeellooyinka waa dawakhaad. Sidaa awgeed, way kugu habboon tahay inaad maamusho habeenkii.
Noocee Magnesium ayaa ugu fiican?
Waxaa jira in ka badan shan nooc oo ah Kaabis magnesium, kuwaas oo u shaqeeya si ka duwan. Sidaa darteed, doorbidkaagu waa inuu ku xirnaadaa wax kasta oo geeddi-socod ah oo aad rabto inaad maamusho. Qaado, tusaale ahaan, Magnesium L-Threonate waa xulashada ugu dambeysa ee qofkasta oo leh ka dib markii uu xoojiyo garashada iyo kor u qaadida howlaha maskaxdooda.
Si ka duwan dhiggeeda, Magnesium L-Threonate daroogada walwalka waxay leedahay helitaan bioavailability sare oo lagu daray iskutallaabida caqabada maskaxda-maskaxda.
Magnesium L-Threonate miyuu ku fiican yahay walaaca?
Qaadashada kiniiniyada 'Magnesium L-Threonate' waxay yareyn doontaa niyaddaada, waxay yareyn doontaa buuqa, waxayna yareynaysaa welwelka. Saameynteeda dejinta waxay ka dhigeysaa daawo ku habboon walwalka.
Magnesium L-Threonate ma u fiicantahay cadaadiska dhiigga?
Magnesium L-Threonate wuxuu u dhaqmi karaa sidii kaalshiyam kaalshiyam ah. Daroogadu waxay si weyn hoos ugu dhigi doontaa cadaadiska dhiigga illaa 5.6 / 2.8mm Hg. Daraasaduhu waxay xaqiijinayaan inay ka hortageyso cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga oo ay ka mid yihiin istaroogga dhiig-karka jirka, dhiig-karka, xaaladaha wadnaha iyo wadnaha, iyo wadnaha wadnaha.
Isugeynta qiyaasta Magnesium L-Threonate ayaa ah inaad ku maamuli karto dhowr daroogo antihypertensive ah.
Mudo intee le'eg ayay Magnesium L-Threonate qaadanaysaa inay shaqeyso?
Faa'iidooyinka Magnesium L-Threonate waxay soo muuqan doonaan bil kadib, gaar ahaan haddii aad bangiga kafasaxayso garashada. Waxay ubaahantahay uguyaraan afar usbuuc si kor loogu qaado heerka magnesium-ka maskaxda, taas oo ku haboon samaynta xusuusta.
Haddii aad daweyneyso hurdo la'aan, kaabis ayaa isla markiiba shaqeyn doonta. Walaaca, niyadjabka, iyo dhibaatooyinka murugada kadib, dib u eegista Magnesium L-Threonate waxay xaqiijineysaa in saameyntu ay tahay mid la arki karo toddobaad gudihiis.
Shen, Y., et al. (2019). Daaweynta Magnesium-L-Threonate waxay sare u qaadeysaa Heerka Magnesium ee Dareeraha Cerebrospinal iyo Cilladaha Gawaarida Gawaarida iyo Dopamine Neuron Loss ee Mouse Model ee Cudurka Parkinson. Cudurka Neuropsychiatric iyo Daaweynta.
Slutsky, I., iyo al. (2010). Kordhinta Barashada iyo Xusuusta iyada oo kor loo qaadayo Maskaxda Maskaxda. Volume 65, Issue 2, p143-290.
Mickely, AG, iyo al. (2013). Cunnooyinka Cunto-xumada ee Magnesium-L-Threonate Xawaareyn Degdeg ah waxayna yareyneysaa soo-kabashada is-beddelka ah ee Ka-noqoshada Dhadhanka Xaaladda. Farmashiiste, Bayoolaji, iyo Dabeecad, Volume 6, p16-26.
Wei, Li et al. (2014). Sare u qaadida Maskaxda 'Magnesium' waxay ka hortageysaa luminta synaptik iyo dib u celinta cilladaha garashada ee cudurka Mouse Model Mouse. Maskaxda Molecular.
Zarate, Carlos et al. (2013). Muuqaallo Cusub oo loogu talagalay Daaweynta-U Adkeysiga Niyadjabka. Annals of New York Academy of Sciences.
Wroolie, TE, iyo al. (2017). Tijaabada Furan-Lab ee Magnesium L-Threonate ee bukaanka qaba Dementia. Cusbooneysiinta da'da, Volume 1.
1.Maxaynu ugu baahanahay Magnesium?
2.Waa maxay Magnesium L-Threonate?
3.Maxaa loo adeegsadaa Magnesium L-Threonate?
4.Magnesium L-Threonate faa iidooyin ahaan sida kaabis nootropics ah
5.Sidee loo qaataa Magnesium L-Threonate
6.Ma jiraan waxyeellooyin soo raaca qaadashada magnesium L-Threonate supplement?
7.Magnesium L-Threonate budada ayaa isticmaasha iyo adeegsi
8.Waxaa laga iibsadaa budada cayriin ee Magnesium L-Threonate